Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. परिवारका ११ सदस्य, आपसमा २३ पटक बिहे – Emountain TV
एजेन्सी, १४ असोज । छिमेकी मुलुक चीनमा विवाह तथा डिभोर्ससँग सम्बन्धित एउटा अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । एउटा चिनियाँ परिवारका ११ सदस्यहरुले एक आपसमा २३ पटक बिहे गरेका छन् । तर दुई हप्ताको बीचमै सबैले एक अर्कासँग डिभोर्स पनि गरेका छन् ।
समाचार अनुसार सरकारी सुविधा लिनका लागि परिवारका सदस्यहरुले एक अर्कालाई बिहे गरेका हुन् । झेजियांग प्रान्तस्थित लिसुई सहर नजिकैको एक सानो गाउँमा बस्ने पेन नामका एक व्यक्तिले सरकारको सहरी नवीकरण मुआब्जा योजनाको बारेमा थाहा पाए । उक्त योजना अनुसार स्थानीय बासिन्दालाई कम्तिमा ४० वर्गमिटरको एउटा अपार्टमेन्ट दिइने घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारको उक्त योजनाको लाभ उठाउन पेनको एउटा गज्जबको आइडिया सोचें । उनले सन् २०११ मा डिभोर्स गरिसकेकी आफ्नी पूर्वपत्नीसँग पुनः बिहे गरे । त्यसपछि सरकारी योजना अन्तर्गत उनलाई अपार्टमेन्ट प्राप्त भयो । अपार्टमेन्ट पाएको ६ दिनपछि उनले ती पत्नीसँग फेरि डिभोर्स गरे ।
ती व्यक्तिको लोभ यति बढ्यो कि अर्को अपार्टमेन्ट पाउनका लागि उनले आफ्नी साली र बहिनीसँग पनि बिहे गरे । यतिमात्र नभै अन्य महिला आफन्तहरुलाई पनि उनले यहीँ धोखाधडीमा फसाए । डिभोर्स गरिसकेका आफ्ना बुवा आमाको पनि पुनः बिहे गराइदिए । पञ्जिकरण गरेर अपार्टमेन्ट पाएपछि डिभोर्स गराइदिए । अन्ततः ती व्यक्तिको त्यस्तो बदमासीको बारेमा सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी पाए ।
यसरी एक अर्कामा बिहे गर्दै डिभोर्स गर्दै गर्ने ११ जना व्यक्ति एकै ठाउँका रहेको पनि खुलेको छ । त्यसको मूल नाइके चाहिँ पेन नामका व्यक्ति थिए । प्रहरीले सबै ११ जनालाई गिरफ्तार गरेको छ । अनुसन्धानपछि ४ जनालाई हिरासतमा लिइएको बताइएको छ ।